तपाइको यस्तो छ आजको राशिफल ? – Saurahaonline.com
तपाइको यस्तो छ आजको राशिफल ?
बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। साझेदारीमा पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला। समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। त्यसैले महत्त्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। आसलाग्दो काम बिग्रिए पनि मेहनत गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ।